Ruushka Iyo IRAN Oo Isku Dayay Faragalinta Doorashada Mareykanka. – somalilandtoday.com
(SLT-Washington)-Agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka John Ratcliffe ayaa Arbacadii sheegay in dowladaha Russia iyo Iran ay labadaba isku dayeen inay soo faragaliyaan doorashada madaxtinimo ee Mareyakanka ee 2020ka.
Ratcliffe Ratcliffe oo ka hadlayay shir jaraa’id oo si deg deg ah loo soo abaabulay, ayaa sheegay in Mareyaknka uu lacago dul saari doono waddan kasta oo shisheeye oo soo faragaliya doorashada Mareaykanka ee 2020-ka, iyadoo uu shirka jaraa’id ku wehliyay agaasimaha hay’adda FBI-da Chris Wray.
“Waxaan xaqiijinnay in qaar kamid ah macluumadka diiwaangalinta cod bixiyeyaasha ay heleen Iran iyo si qaas ah Russia,” ayuu yidhi Ratcliffe intii lagu guda jiray shirka jaraa’id,
Wuxuu sheegay inay arkeen Email-lo ay dirtay Iran oo loogu talagalay in lagu khalkhalgaliyo codbixiyeyaasha, kicin bulsho iyo in lagu dhaawaco madaxweyne Donald Trump.
Hadalka madaxa Sirdoonka ee Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo doorashada madaxtimo ee Mareayknka ay ka hadhsan tahay laba toddobaad oo kaliya, jilayaasha shisheeyahana ay raadinayan habab ay kusoo faragaliyaan doorashada si natiijada ay waddaeeda uga weeciyaan.